Students Unions (The Republic of the Union of Myanmar) Nih China President Xi Jinping Cu Ti Bak Hin Ca An Kuat Cang – Onlinenungak
Students Unions (The Republic of the Union of Myanmar) Nih China President Xi Jinping Cu Ti Bak Hin Ca An Kuat Cang
လူငယ်တွေ တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းအားကိုးလာရပြီ
ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ စု၍သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့
(မြန်မာ၊ English၊ Chinese ဘာသာများဖြင့်)
ရကြ္စဲ။ ။ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၂၁
အကြောင်းအရာ။ ။မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် မြန်မာလူထု၏ဆန္ဒကို အလေးအနက် အသိအမှတ်ပြုရန်
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့မိသားစု၀င် နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးနှင့် မိတ်၀တ်မပျက် ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ထားသည်ကို တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် သိရှိမည်ဟု ယုံကြည်သည်။
၂။ လူသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လှုပ်ရှားနိုင်မှုကို တားဆီးပိတ်ပင်ထားသည့် အမှောင်ကျနေသော အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးစနစ်များသည် ခေတ်သစ်ကာလနှင့် မည်သို့မျှ မကိုက်ညီတော့ကြောင်းကို မိမိတို့မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ ဟောင်ကောင်ပြည်သူများ၊ ထိုင်းပြည်သူများအစရှိသဖြင့် အသီးသီး ထုတ်ဖော်ပြသလျက် ရှိသည်ကို တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေဖြင့် နားလည်လက်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီ အေရး ကြိုးပမ်းမှုများသည် ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ပြည်သူအားလုံးအတွက် အင်အားတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရသိရှိစေရန် ပြောကြားလိုသည်။
၃။ တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် အိမ်နီချင်းကောင်းပီသပါက မြန်မာပြည်သူလူထုက တင်မြှောက်ထားသည့်အစိုးရကို မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည့် စစ်အုပ်စုကို လုံး၀ အသိအမှတ်မပြု၊ လုံး၀ပူးပေါင်းခြင်း မပြုကြောင်းကို ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာတွင် အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားသင့်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာတွင် ယင်းသို့ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူ မြေပြင်တွင် လည်း မည်သည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှမပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကို လေးစားကြောင်း ပြသရန်လိုပါသည်။ စစ်အုပ်စုကို ထောက်ပံ့ခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ကိုသော်လည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုသော်လည်းကောင်း ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာတွင် သိက္ခာတရား အကြီးအကျယ် ကျဆင်းစေမည်ကို သိရှိရန် သတိပေးလိုပါသည်။
၄။ စစ်အုပ်စုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းများကို မည်သည့်ပုံစံနှင့်မျှ မပြုလုပ်ရန်နှင့် ဟောင်ကောင်၊ တိဗက်၊ ထိုင်းပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားရန် ကျွန်ုပ်တို့က ပြောကြားလိုပါသည်။
၅။ ယနေ့ကျရောက်သော တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အခါသမယမွစ၍ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ်ဘာကြီး၏ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကို စစ်မှန်သော စေတနာစိတ်ထား၊ ရိုးဖြောင့်သော လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းလည်း ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
-ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်
မစ္စတာ အန္တိုနီယို ဂူတာရပ်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ
မစ္စတာ ဘာဘရာဝုဒ်၀ဒ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ
မစ္စ နာဇတ်ရှိန်မီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ
Date: : 11th February, 2021
Subject: : To recognize the will of Burmese People in the cause of democracy in Burma
1. We do believe the Peoples Republic of China knows well that Myanmar, as beingamember of the global family, has established diplomatic relations with worlds countries.
2. The administration, legislature and judiciary that limit and prohibit the freedom and rights of the individual are out of step with the modern age. The Chinese government China Communist Party must accept and understand that the people of Hong Kong and Thailand, together with Burmese People, have been expressing concern over the allegations. For your knowledge, this unfailing Burmese people’s fight for democracy remainsagood force for people not only in Thailand and Hong Kong but also from all over the world.
3. If the Chinese government want to insist asagood neighbor, the Chinese government must state clearly on the world stage that they do not recognize the military regime which has unjustly detained the legitimate government elected by Burmese people. With their statement on the world stage, at the same time, there must not be any cooperation with the military regime at all on ground, in order to express that the Chinese government have due respect to the will of Burmese people. By supporting for the military regime, the consequences will cause serious damage on the reputation of the State Council of China, Central Military Commission and the Communist Party on the world stage.
4. We insist not to hand any kind of support to the military regime and to respect the rights of Hong Kongs, Tibets and Thailands people.
5. On this auspicious day of Chinses New Year Eve, may the Peoples Republic of China continue to show genuine and sincere commitment to world development and peace.
Students Unions (The Republic of the Union of Myanmar)
– Yangon Technological University
– Mandalay Technological University
– Technological University (Hpa-an)
– Technological University (Hmawbi)
– West Yangon Technological University
– University of Information Technology
– Technological University (Sagaing)
– Government Technological Institute (Insein)
– Government Technological Institute (Shwe Pyi Tar)
– University of Medicine (1), Yangon
– University of Medicine, Mandalay
– University of Medical Technology, Yangon
– University of Dental Medicine, Yangon
– Yangon University of Foreign Languages
– University of East Yangon
– Hpa-an University
– Maubin University
– Technological University (Myeik)
U Win Myint, President
Daw Aung San Su Kyi, State Counsellor
Mr. Antnio Guterres, Secretary General of the United Nations
Mr. Barbara Woodward, President, Security Council, United Nations
Mrs. Nazhat Shameem, President, Human Rights Council, United Nations
Credit …ZN.H 🇦🇺